Isbedelka Cimilada wuxuu dhalin doonaa 100 milyan oo dad ah oo sabool ah Saadaasha Shabakadda
Isbeddelka cimilada kaliya ma saameynayo nidaamyada deegaanka iyo badaha adduunka oo dhan. Waxay sidoo kale saameyn taban ku leedahay dhaqaalaha aadanaha. Saamaynta ay ku leedahay dhulka iyo howlaha aadamiga awgood (si la yaab leh, isla waxqabadyada dhaliya), Bangiga Adduunka wuxuu ka digay in isbeddelka cimilada waxay soo saari doontaa 100 milyan oo sabool ah oo dheeraad ah sanadka 2030.
Tan waa la yareyn karaa haddii isbeddelada isticmaalka hadda la beddelo oo tallaabooyin loo qaado dhinaca kala-guurka tamarta ee ku saleysan tamarta la cusbooneysiin karo oo ah il tamar, marka lagu daro fulinta ujeeddooyinka uu dejiyey Heshiiska Paris.
3 Xaaladaha quusta
4 Isbedelada dhacdada
Wareysi ay daabacday maanta wargeyska Faransiiska "Le Figaro", agaasimaha guud ee Bangiga Adduunka, Kristalina Georgieva, waxay iftiimisay in kasta oo kululaynta adduunka ay saameyn ku yeelaneyso adduunka oo dhan, haddana halisteeda ayaa si gaar ah muhiim ugu ah dalalka saboolka ah, waana sababta aan ugu qasban nahay inaan caawino si xoog leh iyo "isla markiiba" si ay ula qabsadaan kaabayaashooda oo ay u horumariyaan beerahooda.
Beeraha, markiisa, ayaa sabab u ah ka faa'iideysiga xad dhaafka ah ee biyaha iyo wasakheynta harada. Intaas waxaa sii dheer, waa sababta keentay xaalufinta malaayiin hektar sanadkiiba, sidaa darteed gabi ahaanba xal buuxa ma ahan. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan, maadaama mar kasta oo meeraha jira ay jiraan afaf badan oo la quudiyo, beeraha ayaa sidoo kale ka caawiya soo nuugista CO2 sawir-gacmeedka ay qaadaan dalagyada.
Waxaa jira 500 milyan oo qof oo xaalad aad u jilicsan ku sugan wadamada sida Haiti, Iraq, Syria ama Libya iyo Africa. Meelahan waxay la il daran yihiin isku dhacyo la xiriira hubka iyo dagaalladda oo horseedaya faqri weyn, laakiin sidoo kale waxaa saameeya, isbeddelka cimilada.
Si taas loo muujiyo, khilaaf ayaa ka qarxay Suuriya oo ku soo beegmay abaar sababtay in dadka reer miyiga ahi ay u haajiraan magaalooyinka. Markay muddo gaaban dadku u dhaqaaqaan dhanka xudunta magaalooyinka, dalabka kheyraadka ayaa kor u kacaya. Haddii abaartu aysan wada helin biyo, dagaalka kheyraadka ayaa bilaabmaya.
Tusaale kale oo ah isku dhacyada hubeysan iyo isbedelka cimilada xiriir dhow ayaa la leh in waqooyiga Maali wax soo saarka hoose ee dhulka oo leh saameyn taban oo ku timaadda dadka oo loo doorbiday xasillooni darro siyaasadeed.
Iyada oo ay la soo gudboonaadeen xaaladahan ay kheyraadku sii kordhayaan xaddidaadda dadka, abuurista xasillooni-darrada, dagaallada iyo kororka cudurrada iyo dhimashada, waxaa aad u suurtagal ah in tirada dadka ku bara-kacaya meelaha kale ee aan doonistooda aheyn ay sii kordhi doonaan. Tahriibku waa wadada kaliya ee ay ku baxsadaan qoysas badan oo aan sii wadan karin shaqadooda sababo la xiriira dhaqaale la’aan ama cabsi dagaal.
Sida laga soo xigtay UN, hadda waxaa jira 65 milyan, oo 21 milyan ka mid ahi yihiin qaxooti siyaasadeed, taas oo ka dhigan rikoodh taariikhi ah oo barakicinta dadka ee meelaha nabdoon. Bangiga Aduunka, sida uu tilmaamay Gudoomiyihii hore ee Yurub ee Gargaarka Bani’aadamnimada iyo Miisaaniyadda, wuxuu u qoondeeyay celcelis ahaan 10.000 milyan oo doolar sanadkii la dagaalanka isbedelka cimilada sanadihii la soo dhaafay.
Laga bilaabo 2020, qorshayaal ayaa la fulin doonaa kuwaas oo u huraya 28% ee dhaqaalahaaga si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada ee meelaha ugu nugul iyo kuwa jilicsan. Tani waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa in laga fogaado khilaafaadka siyaasadeed ee ku saabsan danaha iyo ilaha dhaqaale sida biyaha.
Waa in aynaan iloobin in xaaladaha aan ku nool nahay ay ku beddelayaan isbeddelka cimilada. Kordhinta heerarka badda, magaalooyinka xeebta waxay mari doonaan tahriib iyo wax ka beddel. Dhinaca kale, dowladaha waa inay u qoondeeyaan qeyb weyn oo ka mid ah waxsoosaarka waddamada si loo fuliyo qorshayaasha la qabsiga ee ka soo horjeedka isbedelka cimilada.
Muuqaalka na sugaya rajo badan maahan, sidaa darteed dhammaan ficilada aan hadda qaadno waa ay yar yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka cimilada wuxuu dhalin doonaa 100 milyan oo dad ah oo sabool ah